DMCA - Tools ကို Hack
morehacks အခြားသူများရဲ့မူပိုင်ရိုသေလေးစား. morehacks အရမ်းလေးလေးနက်နက် Intellectual Property ၏ကိစ္စရပ်များကိုယူသူတို့နှင့်သူတို့၏ Online content တွေကိုထုတ်ဝေစီမံခန့်ခွဲကူညီနေစဉ်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံမှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဟာ morehacks တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကနေရယူနိုင်ပါတယ် Hack ရိုးရိုး search engine ကိုကြောင်းသတိပြုသင့်.
သင်သည်သင်၏မူပိုင်အလုပ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဥပဒေနှင့်ဤ site ပေါ်တွင်အသုံးမပြုနိုင်သောလမ်းအတွက်ကော်ပီကူးပြီဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်, ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေထွက်ထားအဖြစ် 1998 (DMCA). သင့်ရဲ့တိုင်ကြားစာအကြောင်းမူကား DMCA အောက်တွင်တရားဝင်ဖြစ်, ထိုပြောဆိုထားသည်ကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု၏အသိပေးစာများကိုပေးတဲ့အခါအောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုပေးရပါမယ်:
ကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်ခံရဖို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှုလှုပ်ရှားမှုရဲ့ subject ဖြစ်ကြောင်းဖယ်ရှားခံရတံ့သောပစ္စည်းဖော်ထုတ်ဖို့
အဝေဖန်ခံရပါတီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှ service provider ကခွင့်ပြုမှသင့်လျော်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်, ထိုကဲ့သို့သောလိပ်စာအဖြစ်, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, နှင့်, ရရှိနိုင်သောလျှင်, တစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်စာပို့လိပ်စာ
ကောင်းယုံကြည်ခြင်းအတွက်စောဒကပါတီ "ထုံးစံရှိပစ္စည်း၏အသုံးပြုမှုကိုတိုင်ကြားသူကယုံကြည်သောကြေညာချက်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ခွင့်အာဏာသည်မ, ၎င်း၏အေးဂျင်, သို့မဟုတ်ဥပဒေ "
ကို "အသိပေးအတွက်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်သည်" ဆိုသည့်ဖော်ပြချက်တစ်ခု, နှင့် "မမှန်သောသက်သေခံခြင်း၏ပြစ်ဒဏ်အရ, အဝေဖန်ခံရပါတီ "ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ကိုထိပါးသည်ကိုတစ်ဦးသီးသန့်ကြေညာ၏ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာသည်
အထက်ပါသတင်းအချက်အလက်ရေးသားထားသောအဖြစ်တင်သွင်းရပါမည်, အောက်ပါ Designated ကိုယ်စားလှယ်မှ faxed သို့မဟုတ်မေးလ်ပို့ပေးအသိပေးချက်ကို:
Attn: DMCA ရုံးမှ
ဤအချက်အလက်သည်ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်မသင့်, တရားဝင် DMCA notification များကိုလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုနောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက်, မြင် 17 U.S.C. 512(က c)(3).
ဆက်သွယ်ရန်ကို EMAIL: morehacks@yahoo.ro